भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापानाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका ८ सय ५० शब्द - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापानाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका ८ सय ५० शब्द
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सफलता सरकारको सफलता हो । सिङ्गै नेपालको सफलता हो । हाम्रो विकासका प्रयासको सफलता हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलता हो । हामीले लामो वलिदानी र संघर्षपूर्ण प्रयासपछि संघर्षलाई सफलतामा पुर्याएका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अर्थात हामी आफैँले छानेको प्रणाली ल्याएका छौँ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनताले छानेको जनताले बनाएको संविधान आएको छ । जनताले रोजेको प्रणाली स्थापना भएको छ । जनताले छानेको सरकारले काम गरेको छ । र, जनताले अस्थिरता नहोस भनेर बहुमतको सरकार दिएका छन् । अब यस्तो हुँदा पनि विकास भएन भने कस्तो हुँदा चाहिँ विकास हुन्छ त ? विकास हुनका लागि चाहिने सबै कुरा उपलब्ध भइसकेपछि पनि विकास भएन भने कहिले विकास हुन्छ ? विकास हुन्न भने अब राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्ने, व्यवस्थापनमा कमी राख्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र निर्मुल गर्न नसक्ने कुराले मात्रै विकासलाई रोक्ने हो । त्यसकारण अब हाम्रो ध्यान सुशासन र विकासमा गएको छ । सुशासन र विकासका लागि अर्थात दुई ओटै शब्द र उदेश्य पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलनलिकरण आवश्यक छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भ्रष्टहरुको पनि शत्रु हो भ्रष्टाचार । भ्रष्टलाई पनि पैसा कहाँ लुकाउने भन्ने छटपटी, अख्तियारले थाहा पाउला कि भन्ने छटपटी, कतै फेला पर्ला कि भन्ने छटपटी, कसैले कुरा खोल्दिने हो कि भन्ने छटपटी, राख्ने ठाउँ नभएर छटपटी । ऊ अनेक छटपटीमा पर्छ ।
त्यसमा पनि उसलाई सुविस्ता हुँदैन ।भ्रष्टाचारको सानो अंशका कारण बढी अंश जहाँ लुकायो त्यहिँ समाप्त हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रतिफल अरुले निकाल्छन् । तर, अपराधको भागिदार ऊ आफैँ हुन्छ । प्रायः भ्रष्टाचार त्यस्तै हुन्छ । अझ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने तयारी र संकल्पका साथ हामी अघि बढेका छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दृढ संकल्पित छ । अन्य निकायहरु दृढ संकल्पित छन् । त्यसैले अब भ्रष्टाचार मुलुकले नै लुककाउन संम्भव छैन । त्यसकारण यो भ्रष्टहरुका लागि पनि शत्रु नै हो । भ्रष्टहरुलाई घरमा श्रीमतीले पनि घृणा गर्छन् । छोराछोरीले पनि घृणा गर्छन । उनीहरुले समेत उपयोग पनि गर्छन र घृणा पनि गर्छन् । उनीहरुलाई पनि यो त भ्रष्ट हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसकारण पनि भ्रष्टाचार सबैको शत्रु हो । त्यसकारण हामी सबैले यो शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी लाग्न जरुरी छ । पहिलो कुरा त कारबाही गरेर, दण्डविधी अपनाएर, नियन्त्रणको विधि अपनाएर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अझ म त आग्रह गर्न चाहन्छु ऋषिमुनीहरुको, सन्तहरुको, ज्ञानी र ध्यानीहरुको, माहात्माहरुका सन्तती हौँ हामी । त्यसैले यस्ता सन्तती हामीले भ्रष्टाचार नगरे भ्रष्टाचार हुन्छ कसरी ? हरेकले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्यो भने त भ्रष्टाचार नै हुँदैन । भ्रष्टाचारले समाजप्रतिको विश्वास वा सामाजिक विश्वासलाई नै कमजोर बनाई दिन्छ । त्यसकारण पनि हामी यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
हाम्रो समाज एउटा आदर्श समाज हो । एउटा सदाचारी समाज हो । नैतिकतामा, इमानमा, जमानमा, बाचा–बन्धनमा विश्वास गर्ने समाज हो । यो सदाचारयुक्त समाजलाई केहीले प्रदुषित पार्ने प्रयास गरेका छन् । तर, हामीले प्रदुषित हुन दिनुहुँदैन । हामी सबैले प्रदुषित हुन नदिने प्रयास गरौँ । हामी सबै स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने र नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने गरी लागौँ । हामी संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा पक्ष त छदैँ छौँ । नेपालको पहिचान भ्रष्टाचारको सूचिमा कति औँ स्थानमा छ भने लज्जाजनक स्थितिमा नहोस भन्ने हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । कतिपयका आग्रहयुक्त, पूर्वाग्रहयुक्त, निराधार अभिव्यक्ति पनि हामीले पाउँछौँ । हामी त्यस्ता कुराबाट कतै पनि विचलित र प्रभावित हुन जरुरी छैन । हामीले नेपाली समाज स्वच्छ र सदाचारी बनाउन लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि यहाँको सरकार, यहाँका जनप्रतिनिधिहरु, यहाँका राष्ट्रसेवकहरु, यहाँका राज्यका सम्पूर्ण निकाएका अंङ्गहरु, राज्य र सरकारका सम्पूर्ण अंङ्गहरु, राज्य र सरकारका सम्पूर्ण नियकायहरु पारदर्शिता, स्वच्छता र पारदर्शितामा विश्वास गर्छन् । त्यस्तो आचरण प्रस्तुत गर्दछन् । सम्पूर्ण पारदर्शिता र सम्पूर्ण स्वच्छताका लागि नेपाल सक्षम छ भन्ने विश्वास विश्वलाई दिन सक्नुपर्छ ।
वास्तवमा जनप्रतिनिधि वा सेवा प्रवाही वा संस्था जसलाई राष्ट्रले जनताको सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ उनीहरुले त्यो अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा त्यसको दुरुपयोग नहोस, भ्रष्ट क्रियाकलाप नगरोस् । किन भने यसै मार्फन नै सरकारलाई हेर्ने हो । समाजलाई बुझ्ने हो । म फेरि पनि चाहन्छु कि हामी सबै यो भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । हामी यो भन्दा माथि नउठ्ने हो भने वा कोही पनि यो भन्दा माथि नउठ्ने हो भने निष्पक्ष र कानुन सम्वत ढंगले दृढताका साथ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुतै राम्रा भनिएका युगमा पनि नराम्रा काम गर्ने, राम्रा प्रयास र शिक्षा–दिक्षा पनि नमान्ने गरेको पनि देखिन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूलिकरणका लागि अख्तियार सक्षम चाहिन्छ । अख्तियार निष्पक्ष र सवल भयो भने मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलिकरण गर्न सकिन्छ । हामीले यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उत्कृट हो भन्ने प्रमाणित गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । जनता सार्वभौम हुने भन्दा माथि अरु केही हुन सक्दैन । जनता आफैँ–आफैँले होइन जनप्रतिनिधि मार्फत नै शासन गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि मार्फत नै संविधान बनाउनुपर्छ त्यो भन्दा माथि केही हुनै सक्दैन । प्रतिनिधि मार्फत नै कानुन बनाउनुपर्छ त्यो भन्दा बढी केही हुन सक्दैन । त्यहि हो विधि, त्यो विधिले वाञ्छित उपलब्धी वा सफलता प्राप्त गर्न त्यसले जनताका समस्या समाधान गर्न सकेन भने, त्यसले समृद्धि हाँसिल गर्न सकेन भने हाम्रो प्रयासहरु ती आर्थिक हुन्, सामाजिक हुन् या अरु हुन् गाग्रिमा प्वाल पारे जस्तो मात्रै हुन्छ । थपेर पनि भरिदैँन, एकछिन भरियो भने पनि त्यो प्वालबाट छिरेर जान्छ । अवस्था त्यस्तै हुन्छ । त्यसकारण जनप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै लाग्नुपर्छ यसको विकल्प छैन ।